Shir Baroor Diiq ah oo Lagu Qabtay San Diego, CA- USA – Rasaasa News
Shir Baroor Diiq ah oo Lagu Qabtay San Diego, CA- USA
Mar 2, 2011 CA- USA, San Diego
Waxaa bisha Feb 28, 2011 ka dhacay magaalada San Diego kullan loogu baroor diiqayey dilkii foosha xumaa ee lagu dilay Sheekh Maxamed Dubbad Xirsi, magaalada Garrissa, kullanka ayaa ka dhacay Hoolka shirarka ee Jaalliyada Afrikada Bari ee San Diego [JABS].
Shirkan waxaa ka soo qeyb galey, Odayaasha, waxgaradka, culimada, dhallinyarada, iyo dumarkaba ka soo jeeda Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Ujeedada shirkani wuxuu ahaa in lagu cambaareeyo dilkii waxashnimada ahaa ee lagu diley Sheekh Maxamed Dubbad Xirsi. Dilkan oo dhawaan ka dhacay magaalada Gaarisa ee dalka Kenya.
Waxaa dadkii shirka ka hadley ay ka sheekeeyeen taariikh nololeedkii sheekha iyo halgankii dheeraa ee uu ugu jirey xuquuqda dadkiisa. Waxay bulshadu dawlada Kenya ka rajeyneysaa in dadkii iyo kooxihii ka dambeeyey dilka sheekha in la soo qabto oo sharciga la hor keeno.
Waxaa aad loogu noq-noqdey cambaareynta dilkaas waxashnimada ah ee Sheekha lagu diley. Waxaana la is tusaaleeyey iney xaaraan tahay in xaq darro lagu dilo shacabka aan hubeysney.
Ugu dambeyntii Waxay bulshadu si wada jir ah tacsi ugu dirteysaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodey marxuun Sheekh Maxamed Dubbad Xirsi. Waxaana Eebbe uga rajeyneynaa in sheekhu naxariistii janno Rabbi ka waraabiyo.